Kuwa soo socda waa arrimaha ugu badan saddex user a wajahaya kaas oo sidoo kale u kaxeeyaa si loo hubiyo in flash aan la cusboonaysiiyey oo kaliya laakiin sidoo kale looga eego cayayaanka:
1. mugga jeneerigga ah aan la joojin karin
The hardware wuxuu tegsiiyaa ammaanka aan la shaqeeyo oo ku keenay arrimaha oo dhan.
2. Windows awoodin in aad buuxiso qaabka
Firmware ama OS laftiisa siinayo khaladaadka iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in dhalato laga wada hadli doonaa ka dib.
3. Geli disk a baadi drive
Sidoo kale waa mid ka mid ah khaladaadka caadi ah oo ay tahay in la xuso in tutorial Tani waxay sidoo kale ku qor doonaa xal u ah dhibaatada aan arin kasta.
Sida loo helo / iskaan dhibaatooyinka ka
Waxaa jira siyaabo badan si ay u hubiyaan in drive la hubiyaa in arrimaha iyo dhibaatooyinka iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in hore iyo arrinta ugu horreeyey oo waa in la arkaa in ay tahay in deeruhu ee USB inay hubiyaan in dhibaatada la reveled ka dhigi doonaa. User ayaa sidoo kale u samayn karaa tricks kale sida formatting drive ah, joojinta mugga iyo qaar badan si ay u hubiyaan in arrinta dhabta ah labada xalin ama si fiican u la marsiiyey. Waxa kale oo hubin doona in user ma aha oo kaliya helo natiijada ugu fiican, laakiin waxa uu ma aha in ay codsan xal midabbo si loo hubiyo in arrinta la xalin.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka flash drive
Kuwa ugu badan oo gobolka ka mid ah arrimaha tahay waxaa looga hadlay bilowgii tutorial iyo hadda si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxaa laga codsadaa dhibaato kasta oo uu soo kor ku xusan in la xaliyo iyadoo la kaashanayo oo ah tallaabo by habka tallaabo in sidoo kale la gundhig doonaa Screenshot si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo ka soo baxa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah.
Waa mid ka mid ah arrinta ugu badan iyo dhibaatooyinka user wajiga arrintan la xiriira. Xalka la xiriira ayaa la siiyey si faahfaahsan sida under:
a. User waa inay hubiyaan in barnaamijka unlocker la soo bixi URL http://www.download3k.com/Install-Unlocker.html si loo hubiyo in la geliyo:
b. User ayaa markaas u baahan yahay in aad is geliso drive USB in ayaa dhibaato iyo waa in la hubiyo in software unlocker waxa loo isticmaalayaa si loo helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira ka dhigi. Drive ka dibna waxaa in la ogaado in folder computer iyo waa in ay ahaataa xaq u riixi:
c. User waa in markaas hubiyo in drive waxaa quful si loo xaliyo arrinta:
Geedi socodka uu soo xiriira arrintan ayaa Caddaynay sida hoos si users helo natiijada ugu wanaagsan:
a. Drive USB waa in la geliyo dekedda iyo computer ka icon My waa in ay xaq u riixi iyo maarayn doorasho waa in lagu soo xulo:
b. Muddo menu shabaqa user fiiriyaa waa in doorasho maamulka disk iyo waxa guji waa in mar waxaa la helay:
c. User waa in ay doortaan drive ku jirta su'aal si loo hubiyo in la hubiyaa caafimaadka iyo waxyaabo kale oo lagu soo bandhigay nidaamka arrintan la xiriira:
d. Drive ka dibna waa in la xaq u riixi in ay qaab si loo hubiyo in nidaamka la dhammeeyo. Waxa kaliya ma ahan qaab doonaa drive, laakiin sidoo kale hubin doona in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah dhameystirka oo aan kaalmo ka wax utility xisbiga saddexaad ama barnaamijyada software la xiriira in la soo saaray arrintan la xiriira iyo habka farshaxanka ku andacoonayaan inay xalliso dheecaanka buuxa:
Sidoo kale waa mid ka mid ah khaladaad aan kaliya lagu ceebeynayo user, laakiin sidoo kale in la hubiyo in user waxaa lagu qasbay in la beddelo drive sida drive kasta ee dekedda isla uusan la kulmi baadi this. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka uu soo sheegnay in tutorial hoose aan la raacay oo keliya habka ugu fiican lakiin sidoo kale waa in la codsaday in si la mid ah si loo hubiyo in natiijada waa wax waa in line la jihada of user iyo sidoo kale sida uu dalabka:
a. User waa inay hubiyaan in drive ay ku xiran yihiin dekedda USB iyo computer ka icon ii waxaa xaq u riixi in ay doortaan in ay maareyso doorasho:
b. User waa in markaas hesho fursada maamulka disk si loo hubiyo in hannaanka horumarka arrintan la xiriira sida ay sidoo kale waxaa loo arkaa in ay tahay geedi socod asaasiga ah:
c. Drive kacsan waa in la ogaado si loo hubiyo in ay sax tahay in la helo riixi dooro ikhtiyaarka ah Change Drive Letter iyo waddooyinka,
d. Marka magaca drive ama jidka ayaa la bedelay u hubiyo in arrinta la xaliyey in buuxa mar kale la dhisay khayraadka ka dhigi doonaa.
Sida loo soo celiyo xogta haddii ay jiraan khasaaro soo gaaray ay sabab u tahay arimaha kor ku xusan
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyada la heli karo online si ay u hubiyaan in xalka ugu wanaagsan waxa la siiyaa user ee arrintan la xiriira. Sidaa darteed waa in user The tago barnaamijyada offline sida mudnaanta sare maadaama ay hubineysaa in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo xogta marna waxyeelleeyey. Waxa intaa dheer in waxan oo dhan barnaamijyadan ayaa sidoo kale la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira ay si buuxda maaraynta barnaamijka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helay in arrintan la xiriira oo dooranaya barnaamij ah in uu buuxiyo baahida iyo baahida user la daryeelka iyo kaamilka ah. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ay Wondershare Data Recovery waxaa loo isticmaalaa si isticmaalka wanaagsan ee khayraadka nidaamka iyo dhinaca kale sidoo kale in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u drive waxaa waxa uu khasaare xog kasta. Waa offline barnaamijka taas oo ka dhigaysa hubiyo in xalka ugu wanaagsan oo 100% kabashada xogta cad loogu balan qaadayo haddii aan la overwritten.
> Resource > Flash Drive > xal Best si ay u cusboonaysiiyaan aad flash drive